Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): The Voice Of Poor
at 3/17/2013 09:09:00 AM
လူအများကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာတွေရဲ့ အပြောင်းလဲအနေထားကို သြဘာပေးမှာပါပဲ။
Many have applauded the moves by the Myanmar government to transform the country's political and economic landscape.
သို့ပေမယ့်၊ ကျေးလက်ဒေသက ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အပြောင်းလဲကို ကတုန်ကရင်ဖြစ်နေကြပါသတဲ့။
However, the rural poor in Myanmar are greeting the changes with trepidation.
အချို့က တိုင်းပြည်၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုသည် အခြေခံလိုအပ်သော ဆီနှင့်ဆန်တို့၏ကုန်ဈေးနုံန်းမြင့်တက်လာသည်ကို ဦးတည်သွားခဲ့လေသည်ဟုဆိုသော အမြင်အားဖေါ်ပြလာသည်။
Some express concern that the development of the country could lead toarise in prices of basic necessities like rice and oil.
အသက် ၄၇ နှစ်ရှိပြီး လလေး ၆ယောက်ရဲ့ ဖခင် ဦးအုန်းမြင့်မိသားစုအဖို့ကတော့ ဆင်းရဲခြင်းသံသရာကြီးက ရှောင်လွဲထွက်လာဖို့ကတော့ အတော်ကြီး ခက်ခဲလိပ်အုံးမယ်တဲ့။
For Ohn Myint,a47-year-old father of six, the poverty cycle for his family will be hard to break.
အထမ်းသမား အငှားသမားဘ၀နဲ့ အလုပ်ကို တလကို ၁၅ ရက်လောက်တော့ အလုပ်ကရပေမယ့် သူ့အတွက် ဖျန်းမျှဝင်ငွေက တနေ့ မြန်မာငွေ ၃ ထောင်လောက်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်နဲ့ဆို ၃သို့မဟုတ် ၄ ဒေါ်လာလောက်ပဲရတယ်လို့ဆိုတယ်။
Working asapotter for about 15 days inamonth, his average daily income is about 3,000 kyats (US$3or4).
သူ့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်း စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အချိန်းပြောင်းကို စတင်လုပ်လာတယ်ဆိုတာကို အများက ကြိုဆိုနေကြသော်လည်း သူတို့လို လူဆင်းရဲတွေအတွက် ဆောင်ရွက်မှုမူဝါဒတွေက်ကတော့ အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ဖို့ ရေးရေးလေးတောင် ရှိမလာသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Although many have welcomed the political and economic reforms introduced in the country, Ohn Myint said the policies have not yielded any positive results for them.
မြို့မှာ တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတောင်မှ သူ့အတွက်က ရုံန်းကန်အားထုတ်ဖြတ်သန်းနေရတုန်းပါပဲ လို့ သူက ဆိုပါတယ်
သူ့ဘသကတော့ ဘာမှကို မပြောင်းလဲပဲ အရင်တိုင်းပါပဲတဲ့၊
He said: "Even though the city is developing, life is stillastruggle for me. Life remains the same for me."
လူအတော်တန်အချို့က ထမင်းအိုးတလုံးစာလောက် တနေ့စာ တနေ့စာ ၀ယ်ခြမ်းနိုင်လာပေမယ့်၊
သူ့အဖို့ကတော့ အနာဂတ်မှာ သူ့အဖို့ ရှာဖွေရတာ ပိုပြီးတော့တောင် ၀င်ငွေလျော့ပါးလာရတာကို စိုးကြောက်မိနေပါတယ်ဟု ဆိုပါသည်။
With fewer people buying clay pots today, Ohn Myint fears he will earn even less in the future.
သူ့ရဲ့မိသားစုက ခလေးတွေဟာ အပိုဝင်ငွေလေးရဖို့ ဘာရီရ အလုပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ အိမ်တွေကို ရေလိုက်ရောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအလုပ်ကလဲ သူ့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အနေထားမရှိပါဘူး။
His children now supplement the family's income by doing odd jobs like delivering water to households, but he is worried that it will not be enough.
လက်ရှိကတော စားနေတဲ့ ထမင်းလေးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ်မှာပဲမှီတည်နေရပြီး သူတို့အတွက် ဟင်းရွက်စိမ်းတပန်းကန်စာလေး အတွက် မြန်မာငွေ ၅၀ကျပ် ဒေါ်လာနှင့်ဆို ပြား၅၀ လောက် ပေးနေကြရတယ်။
Living on just rice and vegetables, they are paying about 50 kyats (US$0.10) foraplate of greens now.
ခြောက်လလောက်အတွင်းမှာပင် အလားတူဟင်သီးဟင်းရွက်ကုန်ဈေးနုံန်းက နှစ်ဆလောက် တက်သွားတယ်လို့ သူက ခန့်မှန်းမိတယ်။
In six months, Ohn Myint expects to pay double of that, for the same amount of vegetables.
လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လူမှုဘ၀နဲ့ ပြည်သူတွေဆီကို ကောင်းတဲ့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေ ရောက်မလာပါဘူး လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ ရလဒ်ဆိုတာကို အစိုးရက လုပ်ပေးတာကို သူ့အနေနဲ့ သိသာမြင်သာတာ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အစိုးရက ပြောနေတာသာလေးရှိတာ၊ လက်တွေကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်တာမရှိပါဘူး ဟုသူကပြောသည်။ အများပြည်သူအတွက်ကတော့ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မလုပ်ကိုင်ပဲ၊ အကျိုးရလဒ်တွေ ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဟု ပြောသည်။
He said: "The recent reforms by the current government are not having any good impact on the wider population. So I'm not convinced that the government reforms can produce the results to benefit the people. The government is merely talking and not taking any action. So without the necessary action, it will not produce any fruitful consequences for the public."
မြန်မာပြည်၏ ယနေ့ လူဦးရေး ၃ပုံ ၂ပုံသည် တောလက်ဒေသများတွင်သာနေထိုင်နေလျက်ရှိကြလေသည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မြို့တွင်းပိုင်းဒေသ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွါးရေး နယ်ပယ်အား အဆောတလျင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေသည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေသော်ငြား၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုရလဒ်သည် ဦးအုန်းမြင့်ကဲ့သိုပ အလားတူတသော အောက်ခြေလူတန်းစားတို့၏ ခံစားသက်ရောက်နိုင်မှုအား ဆောင်းကျဉ်းပေးနိုင်ရန်လိုအပ်နေပါကြောင်း။
About two-thirds of the estimated 60-million population in Myanmar still live in rural areas. Although the Myanmar government has embarked on rapid transformation in the political and economic arena in the city, effects have yet to trickle down to benefit the common folk like Ohn Myint.
မတ်လ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၀နာရီတွင် ရေးပါသည်။
ယခု ဆောင်းပါးသည် ယနေ့ထုတ် Asia Pacific News မှ သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်တင်ပြထားပါသည်။